नासाको अध्ययन : चन्द्रमा देखियो अनौठो गतिविधि,कारण के हो ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नासाको अध्ययन : चन्द्रमा देखियो अनौठो गतिविधि,कारण के हो ?
एजेन्सी । नासाले करिब १२ हजार तस्बिरको अध्ययन गर्दा पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह चन्द्रमाको सतह संकुचीत हुँदै गएको तथ्य भेटाएको छ । संकुचीत हुँदै जाँदा चन्द्रमाको सहतमा पृथ्वीबाट देखिने मानिसको जस्तो तस्बिर पनि मेटिदैं गएको वैज्ञानिकहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । नासाको लुनर रीकानिसेंस आर्बिटरले लिएको तस्बिरको अध्ययनको रिपोर्ट सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । नासाले १२ हजारभन्दा बढि तस्बिरको विश्लेषण गर्दा चन्द्रमाको उत्तरी धु्रवबाट दरार पैदा हुँदै गएको देखिएको छ । अध्ययन अनुसार उत्तरी धुव्रको सतह आफ्नो ठाउँ छोड्दै सरिरहेको जनाइएको छ ।
पृथ्वीमा जस्तो चन्द्रमामा कुनै टैक्टोनिक प्लेट छैन् । तथापी टैक्टोनिक प्लेटले जस्तो सतहमा प्रभाव परेपछि वैज्ञानिक हैरान परेका छन् । विशेषज्ञ वैज्ञानिकहरुले चन्द्रमाको सतहमा भएको यस्तो गतिविधिलाई उर्जा सकिदैं गएको कारण यस्तो भएको हुनसक्ने बताएका छन् । जसको कारण चन्द्रमाको सतहमा दरार पैदा हुँदै जाँदा भूकम्पहरु उत्पन्न हुन सक्ने बताइएको छ ।
वैज्ञानिकहरुले करिब लाख वर्षमा १५० फिट (५०) मिटर जति सतह खुम्चिएको बताएका छन् । युनिभर्सिर्टी अफ मेरी लैण्डका भूगर्भ वैज्ञानिक निकोलस चेमरले लाखौं वर्ष पहिले भएको जस्तो गतिविधि चन्द्रमाको सतहमा अहिले भइरहेको बताएका छन् ।
‘प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुनुपर्छ’
साउन २८ । काठमाडौँ, नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको […]
काबुलमा पुनः आत्मघाती आक्रमण
काठमाडौं । अफगानिस्तानको काबुल नजिकै प्रहरी चढेको सवारीमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । […]
बौद्ध सम्मेलन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बहिस्कार गर्ने !
वैशाख ३१ । काठमाडौं, आगामी जेठ दोस्रो साता नेपालमा हुने बौद्ध सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले […]
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र कामना सेवा विकास बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड (जीआईसी नेपाल) र कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडबीच […]
रौतहटको सदरमुकाम गौर–९ मा ज्वालामुखी विस्फोट
वैशाख २३ ।रौतहट,विनाशकारी भूकम्प पछि त्रासदी फैलिरहेको अवस्थामा रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौर नगरपालिका वडा नं […]